Ngokwemithetho yempilo izithasiselo asebenzayo "Tribulustan" ubalwa njengoba izindlela ze-non-hormone. Namuhla kuwukuphela izidakamizwa okuyinto kuveza eRussia futhi zilandele izilinganiso ezithile ukuze ingxenye esebenzayo main - protodioscin.
Ngesikhathi inhliziyo zomuthi esetshenziswa terrestris Tribulus (Tribulus terrestris). Ithuluzi kuyasiza ukwandisa isifiso sobulili, ngcono potency, ukubuyisela libido. Ukulungiswa iqukethe eyinkimbinkimbi saponins steroid furostanol compounds okuyinto zihlanganisa izinto ezining yemiphumela.
Kusho "Tribulustan" (izimpendulo wezazi uqinisekise lesi) has namagciwane, umphumela umuthi olwa namagciwane (nomthelela Umkhuhlane amagciwane futhi herpes, uba i-antibiotic izitshalo ngaphezulu). Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa usuke ethuthukisa ukuzinza of amazinga cholesterol. Ithuluzi has futhi umsebenzi antifungal.
Izidakamizwa "Tribulustan" (impendulo iziguli eziningi ukuqinisekisa ke) kuyasiza kulesetayelekile ukukhiqizwa kwamaqanda. Kulokhu, ukuphumelela, ngokusho kwabanye odokotela, njengoba kuphakeme kakhulu ngezinye izindlela. Umkhuba usebenzisa izidakamizwa kusikisela ukuthi kungenzeka menopause ukuhlehlisa isikhathi esiyiminyaka emithathu noma ngaphezulu uma isetshenziswa njalo esikhathini premenopausal.
Kusho "Tribulustan" (izibuyekezo namazwana abanye ochwepheshe ukhombe ke) Yenziwe izinga okusezingeni impahla eluhlaza okuyinto usebhekene ukucutshungulwa kobuchwepheshe ekhethekile. Umuthi has a ingxenyenamba okusezingeni eliphezulu ezikuyo izingxenye zemvelo.
Kusho "Tribulustan" (izimpendulo wezazi bamunye ke) kufanele sinikezwe lapho menopause zesifazane ezinzima, ukungazali zesifazane, frigidity. Umuthi kuboniswa ngenxa ukukhuluphala, ephakeme cholesterol, ukunganakwa, ukucindezeleka, ukukhathala okungamahlalakhona. I okufakiwe Kunconywa lapho post-castration kanye syndromes menopausal dislipoprotinemii eshintsha uhlamvu dyskinetic. Kusho inikezwa njengenhlangano asizayo ngo ukwelapha nokuvimbela isifo senhliziyo kanye nesifo sohlangothi, thrombosis semithambo. Ukulungiselela "Tribulustan" kudambisa uketshezi okweqile kusukela umzimba (ejenti isisu kuyinto enhle). Umuthi Ubuye nomthelela omuhle isikhumba, ekuvimbeleni ke kusukela ukuguga, ukunakekela ama-hormone ekuvuseleleni. Umuthi kuboniswa ngenxa ukungazali idiopathic (okuyinto abaziwa izizathu).
Kusho "Tribulustan" is contraindicated in iziguli ngaphansi eyishumi nesishiyagalombili, abesifazane abakhulelwe, nabancelisayo, kanye nabantu hypersensitivity kanye nokuthambekela ukopha.
Umenzi zomuthi kubonisa ukuthi lo mkhiqizo uye inombolo okungenani engemihle. Njengoba umkhuba ubonisa, ithuluzi is kahle ikubekezelele iziguli. Nokho, kwezinye izimo, kungabonakala nasemkhakheni ukusabela iguliswa noma ukugula.
Thenga "Tribulustan" can Pharmacy. Ngaphambi kokuba uthenge ithuluzi, kumele kudokotela ukuze ahlolwe.
Smartphones Shockproof: ukubuyekezwa, ukubuyekezwa. Kuhle shockproof futhi waterproof smartphone "Android"